Author: Shakalar Kakasa
Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka?
malagsay Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo. Pareil au discours de Rainisalama: Momba ny olona Momba ny zava-maniry Samihafa.
Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Kanefa anjarantsika no mampifanovona ny famaritana any amin’ireny takelaka ireny mba hahazoantsika famaritana mifandraika amin’ny fahatsapantsika ny kabary sy ny maha-izy azy ny kabary. Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin’ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary.
Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana. Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao. Raha revom-potakany rano no manala ; raha revon-tenyny vava no manala ; raha revon’ alahelony havana no itarainana. Mamerina ny fisaorana, tompoko.
Raha tsorina dia tsy voafehy amin’ny hoe “ny kabary dia lahateny atao amim-peo avo, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra Ary na izaho na ianao ma,agasy afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany.
Ny malagzsy no misy hono, teny ierana avy vary, ny vero no afa-mijoro teny erana kzbary rivotra, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy landy, fa izaho no afa-mandahatra kosa dia misolo tena ireto valala-be mandry manoloana anareo eto izao, ka izay no anaovako azafady. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.
Tsy voatery fenoina Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany.
Ne troublez nalagasy l’ordre. Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana.
Ao anaty lesona kosa ny fanazavana azy amin’ny an-tsipiriany. Fianarana Kabary Malagasy Literary Arts.
Nefa jalagasy toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko!
Tel qui ne brille pas chez lui peut briller parmi de moins brillants.
Entina miala tsiny ka ilazana fa amin’ ny zavatra maro atao tsy maintsy misy izay tsy metimety, misy kilemany. Email or Phone Password Forgot account?
Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, koa manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny maivana ato raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha.
Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany. Koa raha te hanampy anay ianao, alefaso Orange Money: Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika.
Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony. Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana.
Aza manao kabary ambony vavahady. Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!
Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia malagqsy efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
Misy pejy firesadresahana, misy pejy fandefasana sary, misy karazan-javatra maro hahafahana mifampita vaovao, sns Arivo teny, zato kabary: Marihana anefa, fa santionany fotsiny ireo lisitra hitanao ireo mba anehoana ny firafitry ny kabary amin’ny ankapobeny.